FAKANA AN-KERINY AN’I ARMANE KAMIS : TANY ANTSIRABE NO TRA-TEHAKA NY LEHIBEN’ IREO EFADAHYLa dépêche de Madagascar
La dépêche de MadagascarFiainam-pirenena MALAGASY PEJY MALAGASYFAKANA AN-KERINY AN’I ARMANE KAMIS : TANY ANTSIRABE NO TRA-TEHAKA NY LEHIBEN’ IREO EFADAHY
FAKANA AN-KERINY AN’I ARMANE KAMIS : TANY ANTSIRABE NO TRA-TEHAKA NY LEHIBEN’ IREO EFADAHY
Lehilahy voatondro ho atidoha nikotrika ny fanjavonan’i Armane Kamis, Karana mpandraharaha any Toamasina, ny volana novambra teo, no saron’ny zandary, tany Antsirabe, ny fiandohan’ny volana desambra teo. Fanarahana akaiky ny laharana finday izay nampiasain’ireo olon-dratsy no fantatra fa nahafahana namantatra izay nisy ity lehiben’izy ireo ity, raha ny fampitam-baovao voaray avy eo anivon’ny mpitandro ny filaminana.
“Io laharana an-tariby io no nampiasain’izy ireo tamin’ny fitakiana vola izay saika natao takalon’ny ain’ilay mpandraharaha Karana. Nojerena akaiky ihany koa anefa taorian’izay ireo laharana hafa nifandray tamin’io laharana io ka nanao ladim-boatavo hatrany amin’io lehilahy tany Antsirabe io ny valin’ny fanadihadiana”, hoy hatrany ny fanazavana voaray.
Raindahiny no namaritan’ireo zandary ny momba ity lehilahy fahadimy voasambotra ity. Roa taona lasa mantsy izy no fantatra fa efa voasaringotra tamina fakana an-keriny teratany indianina tany Antsirabe saingy nahazo fahafahana vonjimaika taorian’ny fiatrehany ny fampanoavana. Voalaza ihany koa anefa fa niray tendro tamina mpaka an-keriny teto Antananarivo izy. Anio moa no nilaza ny hihaona amin’ny mpanao gazety any Toamasina ny tomponandraikitra eo anivon’ny Zandarimaria any an-toerana, mahakasika ity raharaha ity.
Tsiahivina fa andro vitsy taorian’ny fodian’i Armane Kamis teo anilan’ny fianakaviany, ny 26 novambra teo, no nanomboka ny fisamborana tany Toamasina. Roalahy no sarona nandritra izany ka nihitatra hatraty Antananarivo izany ary izao tonga hatrany Antsirabe izao.
Partager la publication "FAKANA AN-KERINY AN’I ARMANE KAMIS : TANY ANTSIRABE NO TRA-TEHAKA NY LEHIBEN’ IREO EFADAHY"